Tababarka Suuqyada Dijital ah | Martech Zone
Qoraalku wuxuu ku dheganaa darbiga warshadaha suuq geynta ee dhijitaalka ah iyadoo faafida faafa, qufulku ku dhuftey, dhaqaaluhuna markiisa u wareegey. Waxaan ku qoray LinkedIn maalmahaas hore in suuqleydu u baahnaayeen inay damiyaan Netflix oo ay isu diyaariyaan caqabadaha soo socda. Dadka qaar way sameeyeen… laakiin, nasiib daro badankood ma aysan sameynin. Shaqo ka cayrinta ayaa sii wadaya inay ku dhex faafto waaxaha suuq geynta dalka oo dhan.
Suuqgeynta dhijitaalka ah waa xirfad aad u xiiso badan oo aad ka heli karto laba suuqley oo kala duwan oo leh xirfado kala duwan. Mid ka mid ah wuxuu noqon karaa khabiir ku takhasusay calaamadeynta oo awood u leh inuu farsameeyo khibrad muuqaal ah oo hal abuur leh iyo inuu si wax ku ool ah ugu gudbiyo wax soo saarka ama adeegyada shirkadda. Mid kale wuxuu noqon karaa khabiir dhanka teknolojiyada ah oo fahmaya gorfaynta isla markaana awood u leh inuu horumariyo ololayaasha suuqgeynta dhijitaalka ah ee wada dadaalka suuqgeynta shirkadda. Isgoyska xirfadaha iyo isku celceliska maalmaha shaqo ee mid kasta oo ka mid ah ayaa laga yaabaa inaanay isbaddelin haba yaraatee… weli wali waxay ku xeel dheer yihiin shaqooyinkooda.
Haddii aad rabto inaad ku kordhiso qiimaha ururkaaga hadda jira ama aad u diyaar garowdo booskaaga xiga ee suuq-geynta dijitaalka ah, waxaan kugula talin lahaa inaad naftaada gasho tababar xirfadeed.
Waa Maxay Suuq Digital?
Fikradayda, suuqleyda dhijitaalka ah ee ugu kartida badan ee aan abid lashaqeeyo waxay si qoto dheer u fahmeen qaar kamid ah wadiiqooyinka muhiimka ah iyo dhexdhexaadiyaasha, laakiin si buuxda ayaan u fahmay sida looga faa'iideysto dadka kale shaqsiyan, waxaan aaminsanahay khibradeyda ku saabsan sumadeynta, waxyaabaha ku jira, raadinta, iyo suuq geynta bulshada ayaa iga dhigtay ganacsade ku guuleysta dijitaalka sanadihii la soo dhaafay.
Aag aanan iska dhigayn inaan khibrad u leeyahay ayaa ah advertising iyo tignoolajiyada. Waan fahamsanahay qalalaasaha laakiin waxaan garwaaqsanahay in qalooca barashada si aan u dhiso khibradeyda ay aad ugu adagtahay marxaladan xirfadeyda. Marka, markaan u baahdo ilaha xayeysiinta, waxaan la xariiriyaa la-hawlgalayaasha maalin iyo maalinba ka shaqeeya istaraatiijiyaddan maalin kasta.
Taasi waxay tiri… Weli waxaan u baahanahay inaan fahmo sida iyo goorta looga faa'iideysto xayeysiinta iyadoo qeyb ka ah istiraatiijiyad suuq geyn guud. Taasina waxay u baahan tahay tababar suuq-geyn dijitaal ah. Waxay layaab ku noqon kartaa in badan oo idinka mid ah, laakiin waxaan si joogto ah u qaadanayaa koorsooyin, ka qaybgalka websaydhyada, iyo cunista waxyaabaha aan isku dayo inaan horay u sii joogo. Warshadani si dhakhso leh ayey u socotaa oo waa inaad waqti u hurtaa si aad kor ugu sii socoto.
Sida Loo Noqdo Suuq Digital
Iyada oo barnaamijka nanodegree ee Udacity, kaqeybgalayaashu waxay heli karaan dulmar guud oo ku saabsan wax walboo loo baahan yahay si ay u noqdaan suuqeyaal guuleysta oo guuleysta. Waxay baran doonaan inay abuuraan waxyaabaha suuqgeynta, adeegsada warbaahinta bulshada si ay u weyneeyaan fariintaada, kana dhigaan waxyaabaha lagu ogaan karo raadinta, socodsiinta ololeyaasha xayeysiinta iyo xayeysiinta Facebook. Intaa waxaa sii dheer, baro sida bandhigga iyo xayeysiinta fiidiyowga u shaqeeyaan iyo sida loogu suuq geeyo emaylka, laguna cabbiro oo wax looga beddelo Google Analytics.
Tababbarka Suuqgeynta Dijital ah ee ka socda Udacity
Koorsadu waxay qaadataa ilaa 3 bilood haddii aad u hurto 10 saacadood toddobaadkii oo ay ku jiraan:
Aasaaska Suuqgeynta - Koorsadan, waxaan ku siinaynaa qaab kaa caawinaya abaabulka iyo qorshaynta habka suuqgeyntaada. Waxaan sidoo kale kuu soo bandhigeynaa seddex shirkadood oo lagu soo bandhigay barnaamijka 'Digital Marketing Nanodegree' oo ah tusaalooyin ku saabsan sida loo dabaqo waxaad ka baraneyso labada xaaladood ee B2C iyo B2B.
Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Tusmada - Mawduucu waa udub dhexaadka dhammaan howlaha suuq-geynta. Koorsadan, waxaad ku baraneysaa sida loo qorsheeyo suuqgeyntaada, sida loo horumariyo waxyaabaha sida wanaagsan ugu shaqeeya dhagaystayaasha bartilmaameedka u ah, iyo sida loo cabiro saameynteeda.
Media Social Suuq - Warbaahinta bulshada waa marin awood u leh suuqleyda. Koorsadan, waxaad waxbadan kabaraneysaa aaladaha ugu waaweyn ee warbaahinta bulshada, sida loo maareeyo joogitaankaaga warbaahinta bulshada, iyo sida loo abuuro nuxur wax ku ool u ah barnaamij kasta.
Xayeysiinta Warbaahinta Bulshada - Goynta sawaxanka warbaahinta bulshada ayaa noqon karta mid dhib badan, inta badanna, suuqleydu waa inay adeegsadaan tabo suuq geyn ah oo ay lacag ku siinayaan warbaahinta bulshada si ay u xoojiyaan farriintooda. Koorsadan, waxaad ku baran doontaa fursadaha loogu talagalay xayeysiinta bartilmaameedka ah ee warbaahinta bulshada iyo sida loo fuliyo ololeyaasha xayeysiinta ee u eg kuwa dhageystayaasha ah.
Dhiciyaan Search Engine (SEO) - Mashiinnada raadintu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waayo-aragnimada khadka tooska ah. Baro sida loo wanaajiyo joogitaanka mashiinka raadinta iyada oo loo marayo waxqabadka goobta iyo goobta, oo ay ku jiraan sida loo horumariyo liistada muhiimka ah ee bartilmaameedkaaga, u hagaajiso websaydhkaaga UX iyo naqshadeynta, oo aad u fuliso olole isku-xirka dhismaha.
Suuqgeynta Mashiinka Raadinta Ads Google - Ku habboonaynta muuqaalka natiijooyinka mashiinka raadinta waa qayb muhiim u ah suuqgeynta dhijitaalka ah. Ku xoojinta helitaanka iyada oo loo marayo Suuqgeynta Mashiinka Raadinta (SEM) waa xeelad wax ku ool ah oo lagu gaarayo ujeedooyinka suuqgeyntaada. Koorsadan, waxaad ku baraneysaa sida loo abuuro, loo fuliyo, loona wanaajiyo olole xayeysiis wax ku ool ah adoo adeegsanaya Xayeysiiska Google.
Muujinta Xayeysiinta - Xayeysiinta bandhiggu waa aalad suuqgeyn xoog leh leh, oo lagu xoojiyay aalado cusub sida moobiillada, fursadaha fiidiyowga cusub, iyo bar-tilmaameedka la xoojiyay. Koorsadan, waxaad ku baraneysaa sida muujinta xayeysiintu u shaqeyso, sida loo iibsado loona iibiyo (oo ay ku jiraan jawiga barnaamijka), iyo sida loo dejiyo olole xayeysiis muujinaya iyadoo la adeegsanayo Xayeysiiska Google.
Email Marketing - Emailku waa kanaal suuq-geyn wax ku ool ah, gaar ahaan marxaladda beddelka iyo haynta safarka macaamiisha. Koorsadan, waxaad ku baraneysaa sida loo abuuro istiraatiijiyad suuqgeyn email ah, abuur iyo fulin ololeyaal emayl, iyo cabir natiijooyinka.
Ku cabbiro oo ku-hagaaji Google Analytics - Wax qabadka khadka tooska ah waa lala socon karaa, sidoo kale saamaynta dadaaladaada suuq geynta digital. Koorsadan, waxaad ku baraneysaa sida loo isticmaalo Google Analytics si loo qiimeeyo dhagaystayaashaada, loo cabbiro guusha ka soo bixitaankaaga iyo dadaalka ka-qaybgalka, qiimee u beddelaha isticmaalehaaga himilooyinkaaga, oo u isticmaal fikradahaas qorsheynta iyo hagaajinta miisaaniyaddaada suuqgeynta
Udacity's suuq-geynta dijitaalka ah koorsadu waxay ku jirtaa mashaariicda dhabta ah ee adduunka ee khabiirada warshadaha iyo nuxurka nuxurka ee lagu dhisay iskaashiga shirkadaha heerarka sare.
Macallimiintooda aqoonta leh ayaa hagta barashadaada waxayna diiradda saaraan ka jawaabida su'aalahaaga, ku dhiirrigeliya, iyo inay kugu hayaan wadada saxda ah. Waxa kale oo aad marin u heli doontaa inaad dib u bilowdo taageerada, dib u eegista faylalka Github, iyo hagaajinta astaanta 'LinkedIn' si ay kaaga caawiso inaad horumariso xirfaddaada oo aad ku hesho kaalinta mushahar sare leh.
Samee qorshe waxbarasho dabacsan oo ku habboon noloshaada mashquulsan. Wax ku baro xawaarahaaga kuna gaarto yoolalkaaga shaqsiyeed jadwalka sida adiga kugu habboon.
Noqo Suuqa A Digital
Shaacinta: Waxaan xiriir la leeyahay Barnaamijka Udacity ee Digital Marketer.
Tags: tababarka suuqgeynta waxyaabahasuuq-geynta dijitaalka ahtababarka suuqyada dijitaalka ahmarketing digitaltababarka suuq-geynta dijitaalka ahmuuji tababarka xayeysiintaelearningtababarka suuqgeynta emaylkatababarka google Analyticsaasaaska suuq geyntatababarka aasaasiga ah ee suuqgeyntananodegreetababarka internetkatababarka suuqgeynta mashiinka raadintatababarka hagaajinta mashiinka raadintatababarka seotababarka xayeysiinta baraha bulshadatababarka suuqgeynta warbaahinta bulshadaudacity